Afrika Atsimo: Ilay vehivavy nandany 7 volana tany amin’ny fonja natao ho an’ny lehilahy · Global Voices teny Malagasy
Afrika Atsimo: Ilay vehivavy nandany 7 volana tany amin'ny fonja natao ho an'ny lehilahy
Voadika ny 01 Avrily 2010 6:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, 日本語, polski, Català, Italiano, English
Talohan'ny namotsorana azy noho ny fikasàna hangalatra sy hàka an-keriny tany Afrika Atsimo, notànana tamina fonjan-dehilahy nandritry ny fito volana i Denise Abbah mandra-piandry ny fitsarana azy. Noheverin'ireo mpandraharaha ny fonja ho irony sarimbavy irony izy. Ankehitriny dia mitaky ny rariny i Ramatoa Abbah ka nitory ny Departemantan'ny Sampana Famaizana sy mitaky onitra mitentina R100 000 [avy amin'ny mpandika: Rands no vola fampiasa ao Afrika Atsimo].
Raha ny filazan'ny IOL enin-taona aty aorian'ny nanafàhana azy dia vonona i Denise Abbah ny hamaky ady amin'ny Departemanta noho ny sedra mafy nolalovany. Niteraka dimy i Denise:
Tsy misy na dia kely aza tokony handraisana an'i Denise Abbah, renimpianakaviana 36 taona avy ao Durban, ho toy ny lehilahy. Tsara jerena izy ary tsy misy na iray aza ka olona mahitsy fijery no ho afaka hanombatombana azy ho toy ny lehilahy.
Kanefa dia nalefa tany amin'ny fonjan-dehilahy nandritry ny fito volana izy, izay niafara tamin'ny fanaovana an-keriny sy ny fametavetana tany amin'ny lava-body (sodomia), hoy izy manamafy.
Ankehitriny, enina taona taorian'ny nanafahana azy, te-hamaly faty i Abbah:
“Nisitrika foana aho, Nikorontana ambony ambany ny fiainako. Tsy misy tany izay alehako ka tsy hanarabian'ny olona ahy, ilazan'izy ireny ahy ho lehilahy,” hoy ity renin-jaza dimy avy ao Durban ity. […]
Ao anatin'ireo antontan-taratasy napetraka ao amin'ny Lapam-pitsarana ao Durban, nangataka onitra mitentina R100 000 izy, nefa sady mbola mitady toro-hevitra ny amin'ny fomba hanondrotana ny fitakiany ihany koa izy.
Nanomboka tamin'ny Septambra 2002 ny fampijaliana an'i Abbah rehefa nalefa tany am-ponja hiandry ny fotoam-pitsarana noho ny fanafihana mitam-piadiana, fikasana hamono olona sy haka an-keriny – nafahana tamin'izany fiampangana rehetra izany izy tato aoriana.
Diso ny nitendrena ny anaran'i Denise ka lasa “Denis” raha tokony ho Denise ary nalefa tany am-ponja niaraka tamina lehilahy, izay nanaovana an-keriny azy matetika mihitsy.
Christina Engela dia manoratra ao amin'ny blaoginy Sour grapes- The Fruits of Ignorance [Voaloboka maitso – Voankazon'ny tsy fahalalana]:
Heveriko fa tokony havoitra ny tsy mahamety ny fikarakarana tahaka antsika, sa tsy izany? Ary indrindra tsy tsara mihitsy ny fomba hikarakaraka ANTSIKA – NA EO AZA ny fisian'ireo lalàna heverina hiaro ny olona amin'ny zavatra toy izany .
Raha ny fahitàna azy, nisy tamin'ireo mpiasam-panjakana tampom-pahaizana nandiso ny fitendrena ny anarany hanjary “Denis” – raha tokony ho Denise. ( Eny e, marina izany, misy “e” – toy ny ao amin'ny “education“) Izany zavatra tokana izany dia ampy hamotika ny fiainana manontolon'ity ramatoa ity. Mazava loatra , ny tiako ho lazaina dia hoe tena rava tanteraka mihitsy ny fiainany . Eny, nofonjaina noho ny fiahiahiana ho nanao heloka bevava izy – saingy ankehitriny, na dia nafahana madiodio tamin'ireo fiampangana ireo teo anatrehan'ny fitsarana aza – dia niharam-boina noho ny fanaovana an-keriny maro samihafa, nijaly noho ireo endrika fanararaotana maro samihafa sy ny takaitra ara-tsaina, mampamono tena, ary mety ho nahazo ny otrikaretin'ny VIH sy areti-mandoza maro hafa koa. Tsy ho ampy velively izay teny tsotra avy amin'ny fitsarana na ny Sampan-draharaham-panjakana miahy ny fonja hanao hoe “Kit*** Tena miala tsiny izahay”.
Ao amin'ny blaogy Queerlife, manontany ilay mpitoraka blaogy raha nandà ny hino ireo mpandraharahan'ny fonja rehefa tonga fotoana (nandeha rà) i Abbah, nahoana no tsy nanome fikarakarana ara-pahasalamana ho azy izy ireo? Ary tsy zon'i Denise Abbah ve ny mangataka fizahana ara-pahasalamana amin'ny Governemanta mba ho fanamarinana tanteraka fa vehivavy tokoa izy?:
Fony tonga fotoana i Abbah, niteny taminy ny mpandry fonja fa “noho ny fandidiana ‘operation’ ” izany. Satria, fantatrareo ihany, mandeha rà ny olona aorian'ireny fandidiana igagàna sy tsy mamela takaitra mandritry ny andro voaozona ireny.
4a) Ny fiheverana fa i Abbah dia nandeha rà, ry zareo tsy nihevitra akory ny hanolotra fitsaboana sahaza an'izany, izay azo heverina mialoha, fa afaka manaporofo hoe ahoana marina ny amin'i Abbah.
5) Amin'izao fotoana ny governemanta dia mbola te-hanafy henatra bebe kokoa indray an'i Abbah amin'ny fangatahana azy hanao fitiliana hahafantarana ny maha-lahy na maha-vavy azy ho fanamarinana ny fitakiany, sahala amin'ny hoe tsy ampy ireo zavatra rehetra voalaza tery ambony ( sy ny niterahany zaza dimy, izay azo amarinina tsara ara-panjakana).
Anaty tontolo toy inona no ho ekena ireo zavatra etsy ambony ireo?
Ao amin'ny “Judging a book by its cover” (Tsaraina amin'ny fonony ny boky iray) an'i Helen G, ny tranga nahazo an'i Abbah dia faritany ho barbariana sy fanitsakitsahana ny zo maha-olona ary ampifandraisiny amin'ny nahazo an'i Nastaran Kolestani, vehivavy iray ‘transsexuelle’ nofonjàna nandritry ny iraikambinifolo taona tany amina fonjan-dehilahy:
Ohatra, tsy ela akory izay dia nanoratra aho mikasika vehivavy iray ‘transsexuelle’ fantatra fotsiny amin'ny hoe ‘B’ izay nofonjaina tany amin'ny fonja natao aho an'ny lehilahy nandritry ny dimy taona; Nastaran Kolestani tany Etazonia [U.S.] – voafonja nandritry ny 18 volana talohan'ny nitondrana ny raharahany teo anatrehan'ny fitsarana – ary Vehivavy Espaniola ‘transsexuelle’ iray izay nofonjaina tany amin'ny fonja natao ho an'ny lehilahy nandritry ny iraikambinifolo taona – izay mihitsy, iraikambinifolo taona – talohan'ny nisitrahany ny faran'ny kely amin'ny zo maha-olona izay maro amintsika no mihevitra azy ireny ho toy ny zo voajanahary.
Saingy ity tsy hoe ho fametrahana ambaratongam-pamoretana – ny fomba nitondrana an-dRamatoakely Abbah dia tena feno habibiana: ny fito minitra aza efa tena lavabe, navela irery nandritry ny fito volana – nefa ny fampibaribariana fanitsakitsahana ny zo maha-olona notanterahana tanaty halozàna mifanahim-biby (sadique) sy naharitra fotoana ela nandritry ny taona, tsy mba am-bolana, toy izao natao tamina vehivavy ‘transsexuelle’ voafonja izao.